Realme3Pro: विशिष्टता, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात | Androidsis
Realme3Pro: ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायरा
ईडर फेरेनो | | चिनियाँ एन्ड्रोइड, मोबाईलहरू
हामी हप्ताहरूदेखि Realme3Pro को बारेमा समाचारहरू सुनिरहेका छौं। यो चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायरा स्मार्टफोन हो, ओप्पोको दोस्रो ब्राण्ड। केही हप्ता पहिले यो पुष्टि भयो कि उसको प्रस्तुतीकरण हुनेछ अप्रिल २२ मा लिनुहोस्, यो भएको छ। थप रूपमा, यी हप्ताहरूमा हामी पहिले नै यस फोनका केही विशिष्टहरू जान्न सक्षम भएका छौं, धेरै लीकको कारण, प्रोसेसरको रूपमा तपाइँ प्रयोग गर्नुहुन्छ.
अन्ततः, यो Realme3प्रो पहिले नै आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसो भए हामी चिनियाँ ब्रान्डबाट यो नयाँ स्मार्टफोनको बारेमा सबै कुरा जान्दछौं। एक फोन जुन निर्माताको प्रीमियम मध्य दायरा भित्र सुरू हुन्छ, र त्यसले तपाईंलाई राम्रो भावनाको साथ छोड्ने आश्वासन दिन्छ।
डिजाइन स्तरमा, चिनियाँ ब्रान्डले बजारको फेसन अनुसरण गर्दछ। त्यसोभए हामी पानीको थोपाको रूपमा एक निचको साथ एक स्क्रिन फेला पार्दछौं। फोनमा धेरै क्यामेराहरू हुनुका साथै एन्ड्रोइडको मध्य-दायरा जस्तो सामान्य हुन्छ। हामी तपाईंलाई यस फोनको बारेमा तल बताउँछौं।
Realme3Pro रात क्यामेरा नमूना यसको प्रभावशाली फोटोग्राफिक क्षमता प्रकट गर्दछ
1 निर्दिष्टीकरण Realme3प्रो
निर्दिष्टीकरण Realme3प्रो
ब्रान्ड युरोपेली बजारमा राम्रोसँग चिनिदैन। तर यस Realme3Pro को साथ उनीहरूले कुख्यातता प्राप्त गर्न खोज्दछन्, किनकि यो एन्ड्रोइडको प्रीमियम मिड-रेंज भित्र एक राम्रो विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। राम्रो स्पेसिफिकेशन्स, हालको डिजाइन, एक ग्रेडियन्ट प्रभावको साथ रंगहरूमा शर्त लगाउनका साथै बजारमा फेसनशील। सबै सामग्रीहरू एक सफल हुन। यी यसको विशिष्टताहरू हुन्:
स्क्रिन: पूर्ण HD + रिजोलुसन र १ .6,3।।: Ratio अनुपातको साथ .19,5..9 इन्च IPS LCD
प्रोसेसर: स्नैपड्रैगन 710 .XNUMX
GPU: एड्रेनो 616०
राम: / 4/१6 जीबी
आन्तरिक भण्डारण: / 64/१128 जीबी (माइक्रो एसडीको साथ विस्तारयोग्य)
रियर क्यामेरा: सोनी IMX519 १ 16 MP को एपर्चरf/ १.1.7 + MP MP साथ अपर्चरf/ २.5
फ्रन्ट क्यामेरा: अपर्चरf/ 25 संग १ 2.0 MP
ब्याट्रीVOOC फ्ल्यास चार्ज 4.050.० को साथ ,,०3.0० mAh
अपरेटिङ सिस्टम: अनुकूलन तहको रूपमा र OS्ग ओएस .6.0.० को साथ एन्ड्रोइड पाई
कनेक्टिविटी: डुअल सिम, ब्लुटुथ .5.0.०, GPS, LTE / G जी, वाइफाइ 4०२.११
अरूलाई: फिंगरप्रिन्ट रिडर, ए.आई.
आयामहरू: १156,8. x x .74,2१..8,3 x XNUMX..XNUMX मिमी
वजन: १ 172 grams ग्राम
सामान्यतया हामी धेरै एलिमेन्टहरू देख्न सक्छौं जुन हामी यस स्मार्टफोनमा अन्य स्मार्टफोनमा फेला पार्दछौं यसमा एन्ड्रोइडमा। चिनियाँ ब्रान्ड यसमा रहन्छ यस अवस्थामा inches इन्च भन्दा ठूला पर्दाहरूको प्रयोग। एक स्क्रिन जसले फोनको अगाडि ठूलो फाइदा लिन्छ, अनुपातको साथ .90,8 ०..25% को अनुपातसँग उनीहरूले पहिले नै पुष्टि गरिसकेका छन्। यस पायदानमा हामी फ्रन्ट क्यामेरा पाउँछौं, जुन यस अवस्थामा २ MP MP हो।
यस Realme3प्रो को पछाडि हामीसँग डबल क्यामेरा छ, एक सोनी मुख्य सेन्सरको साथ। थप रूपमा, हामी यसमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि फेला पार्दछौं। ब्याट्री फोनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो, ,,०4.050० mAh को क्षमताको साथ। प्रोसेसरको साथ संयोजनमा यो एक राम्रो स्वायत्तता दिनु पर्छ। यसले ओपीपीओको द्रुत चार्ज टेक्नोलोजी, VOOC लाई पनि प्रस्तुत गर्दछ। हामी एक सरल तरीकाले मिनेट को एक मामला मा बैटरी चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर।
स्न्यापड्रैगन 710१०: मध्य दायराका लागि नयाँ प्रोसेसर
चिनियाँ ब्रान्डका अन्य मोडेलहरू जस्तो सामान्य, यसको सुरुवात एशियाका केही बजारहरूमा शुरू हुन्छ। अहिलेको लागी, भारतमा पहिले नै सुरू गरिएको छजहाँ यो सम्भव छ यो Realme3प्रो पहिले नै खरीद गर्न सकिन्छ। अहिलेको बजारमा यसको सुरूवातको बारेमा केहि पनि उल्लेख गरिएको छैन। चाँडै यो एशियाको अन्य बजारहरूमा निश्चित रूपमा सुरूवात हुनेछ। तर हामीलाई थाहा छैन कि यो युरोपमा पनि शुरू हुन्छ कि छैन, यद्यपि यो हुने सम्भावना थोरै छ।
हामी यो Realme3प्रो को तीन रंगहरु भेट्टाउँछन्, जुन तपाईं फोटोमा देख्न सक्नुहुनेछ। यी लाइटनिंग बैजनी (बैजनी), नाइट्रो निलो (निलो) र कार्बन ग्रे (खरानी) हुन्। त्यसोभए तपाईले यी विकल्पहरू बीच एउटा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, त्यहाँ र्याम र भण्डारणको सर्तमा दुई संस्करणहरू छन्, जसको मूल्यहरू आधिकारिक छन्:
//4 GB जीबीको संस्करण १ 64 13.999 rupees रुपैयाँ (लगभग १179eयूरो बदल्न) को साथ शुरू गरियो।
//१6 जीबीको संस्करण १ 128 Indian भारतीय रुपैयाँको (एक्सचेन्जमा करिब २१16.999 युरो) को साथ आउँछ।
हामी चिनियाँ ब्रान्डको यो मध्य-दायराको अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपणको बारेमा सम्भावित समाचारहरूमा सतर्क हुनेछौं। ब्रान्डबाट यो नयाँ स्मार्टफोनको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Realme3Pro: ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायरा
यो अन्तिम हो: सामसुले ग्यालेक्सी फोल्डको बिक्री स्थगित गर्दछ
वनप्लसका सीईओले भने कि वनप्लस Pro प्रोमा प्रभावशाली प्रदर्शन हुनेछ